तोडियो भारतीय एकाधिकार,चीनको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडियो नेपाल! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
तोडियो भारतीय एकाधिकार,चीनको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडियो नेपाल!
काठमाडौं २६ पुस, । नेपाल चीनसँगको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको छ । नेपाल टेलिकम चीनसँगको क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकसँग जोडिएसँगै नेपालमा भारतीय इन्टरनेट एकाधिकार तोडिएको छ ।
इन्टरनेटमा जोडिने भाका पटक-पटक भाका सार्दै आएको नेपाल टेलिकमले अन्ततः चीनसँगको अन्तरदेशीय इन्टरनेट लिंकको सफल परीक्षण गरेको छ ।